Amerika Latina no faritra be famonoana olona indrindra eto an-tany, Fanadihadiana avy amin’ny fantsona YouTube · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2018 5:58 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Français, Español, polski, 繁體中文, Português, Ελληνικά, Italiano, русский, English
Pikantsarin'ny fizarana voalohany amin'ny andiam-pandaharana, hita ao amin'ny YouTube.
Raha miaty ny 8 isanjaton'ny mponina manerana izao tontolo izao monja, Amerika Latina no ahitana ny 33 isanjaton'ny famonoana olona, mametraka azy ho kaontinanta mamono olona indrindra eto amin'ny planeta. Olona manodidina ny 2,5 tapitrisa eo no nisy namono hatramin'ny nanombohan'ity taonjato ity, fahafatesan'olona izay betsaka kokoa noho ny any amin'ny ady rehetra misy eto ambonin'ny tany ao anatin'izany fotoana izany ihany.
Tao anatin'ny taompolo vitsivitsy, maro ireo fikarohana momba ny toe-javatra izay miezaka ny hampiely ny hitany ho an'ny amin'ny olona amin'ny ankapobeny. Lasa lavitra kokoa amin'izany ny fantsona YouTube La Pulla (“ny rabiraby” amin'ny teny espaniola) Kolombiana manana andiany iray misy fizaràna fito “Famonoana olona: ny voinan'i Amerika Latina” (amin'ny teny espaniola, “Matar, la desgracia de América Latina”).
Velomin'ny tanora mpanangom-baovao avy amin'ny gazety kolombiana El Espectador, naharitra 130 taona, misavasava any amin'ny lohahevitra mifaningotsingotra mampifangaro ny fanadihadiana sarotra fahaizana mamazivazy mivatambatana ny La Pulla. Raha novolavolaina ho an'ny tanora kolombiana izany tamin'ny voalohany, dia manako ny fahazoan'ny fantsona mpanjohy avy amin'ny sokajin-taona rehetra, anatiny sy ivelan'ny firenena Amerikana Atsimo.
Lasa iray amin'ny fantsona malaza indrindra ny andiany “Famonoana olona”, nivoaka tamin'ny jona 2017. Misy dikantsoratra amin'ny teny anglisy aza ny fizaràna sasany.
Tao amin'ny fizaràna voalohany, miresaka ny tranga any Meksika ireo vahiny nasaina manokana. Manazava ny olana ho tsy voatokana ho an'ireo vondrona mpanondrana rongony ihany ny mpamakafaka ara-politika, Jorge Roberto Avilés Vázquez, fantatra an-tserasera ho Callodehacha:
Zavamisy lehibe [tsara ho fantatry] ny filoha Trump: efa ho ny atsasaky ny Amerikana [US] mpivarotra basy no miankina aminay ho mpanjifa. Ao Meksika ampy izarana fitaovam-piadiana ny ampahatelon'ny lehilahy lehibe ao. Any an-tsisintany, misy fivarotana fitaovam-piadiana roa isa-kilaometatra. Raha afangaroharonao ny kolontsain-kerisetra, hantsana ara-toekarena ary ny fanondranana rongony, dia izao no vokany: fatiolona misavovona toa tendrombohitra.
Miresaka endrika manokana amin'ny toe-javatra ny fizaràna sasany, toy ny taha avon'ny famonoana olona niova fananahana — ambanin'ny 40 taona ny taham-pahaveloman’io sokajin'olona io ao amin'ny faritra — ary dia fariparitan'ny indostirian'ny fampitam-baovao sy ny fialamboly [am-panendrikendrehana ho avy amin'ny] fanondranana sy fanjifana rongony.
Any amin'ny fizaràna hafa, maka jery akaiky kokoa an'i Medellín, ilay tanàna kolombiana malaza amin'ny andian-jiolahy mpanondrana rongony ao aminy ny andiam-pandaharana, ary miresaka ihany koa ny fanasitranana izany tanàna izany, izay adikan'ny fihintsanan'ny taham-pamonoan'olona ao aminy hatramin'ny fanombohan'ny taompolo 2000s.
Mifaningotsingotra ny antony ary tsy mifandrohy na amin'ny governemanta na avy amin'ny fisantaran'andraikitry ny vahoaka daholo. Araka ny hazavain'ny lahatsary, singa tsy voatanisa tafaraka no nandray anjara tamin'ny fiofoan'ny tanàna, ao anatin'izany ny fampiasam-bolam-bahoaka [mpanjakana], ny fanolorantenan'ny fokonolona, ary ny fifanarahana eo amin'ny vondrona mpanondrana rongony.
Ao amin'io fizaràna io, fariparitan'ny artista sy ny mpitarika ao amin'ny fiarahamonina, avy amin'ny zava-niainany manokana, ny fiantraikany lavitr'ezaka amin'ny fisantaran'andraikitra ara-javakanto sy ara-panabeazana eo amin'ny manodidina an-dry zareo.
Tahaka izao no fahitan'i Daniela Arbeláez, avy amin'ny ivom-piarahamonina Casa de las estrategias (tranom-teti-panorona amin'ny teny espaniola) azy:
Lasa mihamafy [fo] izahay raha vao resaka herisetra. [Nataonay mahatsapa izahay fa] tahaka ny tsy nisy na inona na inona mitranga. [Milaza amin'ny tenanay izahay] “fa amin'io tranobe fonenana io izany fa tsy amin'ity [misy anay ity]. Aleo tsy be fanontaniana, tsy ho any amin'io tranobe fonenana io aho”. “Ry zareo ihany no mifamono, ary tsy anisan-dry zareo aho”. Ary misy ny tsy fahazoa-mivezivezy amin'ny alina, izay fomba iray hanidiana ny olona ho ao an-tranony. Ny andian-jiolahy no manery hametrahana izany, fa matetika ihany koa ny Fanjakana no manao izany koa. Mihevitra aho fa misy tsy fahaiza-mamoron-javatra ao anatin'izany, ny fanjakana no mampidina ny tenany hitovy fiasa amin'ny andian-jiolahy, fa tsy ny fomba fiasa mifototra amin'ny fokonolona [no] mamaly ny mahaliana ny olona, amin'ny [filàna] toerana itiavana, na idirana na ivoahana ny faritra, na andehandehanana manodidina ny tanàna…
Lahatsary hafa no manavatsava ny trangan'i Venezoelà, izay mihitsoka anatin'ny krizy politika sy toekarena amin'izao fotoana izao, ny any Amerika Afovoany sy ny olana misangirongirotry ny andian-jiolahy, na ny anjara asan'ny rafi-pamonjana amin'ny herisetra sy famonoan'olona an-tanandehibe.